Daraasad | Radio Himilo
Home / Daraasad
Sadia Nour 2 days ago
Ahmed Haaddi 29 days ago
Himilo – Helidda hurdo kugu filan waxay muhiim u tahay caafimaadka qofka inta lagu gudo jiro Bisha ramadaan, waxay siisaa awood. Bisha Soon-qaad muslimiintu waxay habeenkii ku daahaan soo jeed iyagoo salaad iyo cunno cunid ku qaata wakhti badan oo ...
Ahmed Haaddi April 20, 2022
Himilo – Sida ku cad daraasad uu soo bandhigay Ururka Cilmi Baarayasha Soomaaliyeed (SRA) ee fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho, ardayda dhigta iskuulada sare ee dalka ayaa 90% isticmaalka baraha bulshada sida Facebook Tiktok iyo You Tube. Daraasadda waxaa ka qayb ...
Ahmed Haaddi April 10, 2022
Himilo – Cilmi baaris ay si wada jir ah u sameeyeen dawladaha Imaaraadka, Bahrain iyo UK ayaa lagu sahmiyay isa saameynta wanaagsan ee maalmaha soonka iyo caafimaadka. Wargeys ka soo baxa Yurub kana faallooda cunnooyinka nafaqada ayaa dib u dersay ...
Ahmed Haaddi January 29, 2022
Himilo – Noolaha jeerta waxaa jira waxyaabo badan oo laga sheegi karo, marba marka ka dambaysa waxaa ka soo kordha macmuulaad cusub. Haddii aadan awood u laheyn kala saaridda codadka kala duwan, jeertu waxay kartaa inay kala ogaato codka saaxiibka ...
Ahmed Haaddi January 12, 2022
Himilo – 57 jir in muddo ah la dhibtoonayay xannuun wadnaha ka haleeyay ayaa helay wadno kale oo doofaar looga soo beddelay. Waa markii ugu horreysay ee lagu guuleyso in wadne Doofaar lagu tallaalo bani’aadam. Qalliin siddeed saacadood qaatay oo ...
Ahmed Haaddi December 14, 2021
Himilo – Sida lagu ogaaday cilmi baaris cusub ku jimicsiga meelaha ay ku badan tahay hawada wasakheysan waxay saameyn ku yeelan kartaa maskaxda. Ciyaaraha qaar sida kubbadda cagta, kubbadda miiska iyo orodka waxay qofka ka caawiyaan inuu ka badbaado xannuunada ...
Ahmed Haaddi November 23, 2021
Himilo – Ugu yaraantii 2.8 milyan oo ruux ayaa sanadkii caalamka ugu dhinta xaalado ka dhashay cayilka xad dhaafka ah ee afka qalaad lagu yiraahdo Obesity, sida ku dhigan mareegta WHO. Dadkan badigood waxey ku nool yihiin dalalka dhaqaalahoodu xooggan ...
Ahmed Haaddi November 20, 2021
Himilo – Seynisyahanno ka tirsan jaamacadda Tel Aviv ayaa sheegay inay horumariyeen qalab si wanaagsan u sheegi kara marka ay dadku been sheegayaan. Qalabkan cusub ayaa awooda inuu baaris ku sameeyo muruqyada wejiga qofka isagoo adeegsanaya ileys uu ku ifinayo ...
Ahmed Haaddi September 18, 2021
Himilo – Cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen saynisyahanno ku nool dalka mareykanka ayaa soo jeedisay in helidda wakhti badan oo nasiino ah uu waxyeello u geysto caafimaadka maskaxda dadka. Xogaha la helay ayaa raaha ka rogay in wixii ka ...